Trobarany avy hatrany ireo tsy manaiky. Zary anjakan’ny harom-paosy ombana fitaovana enti-manindrona olona toy izao ny faritra Andohatapenaka, indrindra manakaiky ny fiantsonan’ny taksibrosy. Mihorohoro noho izany ireo mpandeha hihazo na avy any amin’ny faritra hiditra ny renivohitra. Tovolahy vao 18 taona indray mantsy no voasambotry ny polisy avy ao amin’ny kaomisaria boriborintany faha-7 ny talata 11 jona teo noho ny fanendahana mitondra antsy lava. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny polisy, ka rehefa fantantra avokoa ny mombamomba azy dia nosamborina ary mbola tratra teny aminy ilay zava-maranitra. Nandritra ny fanadihadiana no nahafantarana fa efa maro no nendahiny teny ary efa misy fitoriana mikasika azy tao amin’ny kaomisarian’ny Boriborintany faha-7.